🥇 nyocha na akuko nke ụlọ ọrụ akwụmụgwọ
Ikwu oke: 4.9. Onu ogugu nke otu: 922
Video nke ndekọ ego na mkpesa nke ụlọ ọrụ akwụmụgwọ
Dezie ndekọ na ndekọ banyere ụlọ ọrụ akwụmụgwọ
A na-ahazi akaụntụ na mkpesa nke ụlọ ọrụ kredit na USU Software na ọnọdụ oge ugbu a, yabụ arụmọrụ ọ bụla nke ụlọ ọrụ kredit gosipụtara ozugbo na ndekọ ya yana n'otu oge edere maka ịkọ akụkọ, ebe ndị ọrụ anaghị esonye na ya nke ọ bụla n'ime usoro ndị a, mana naanị na imezu ọrụ ahụ n'onwe ya na ndebanye aha ya n'ụdị eletrọniki. Mgbe ahụ, omume niile, gụnyere ịkọ akụkọ na ịkọ akụkọ, na-arụ ọrụ site na akpaaka: ịnakọta ozi onye ọrụ na-akwado azụmahịa ndị emere, na-ahazi ya site na usoro, ihe, isiokwu, na ịgbakọ akara ngosi nke ga-aza ajụjụ ma tinye ya na akụkọ na-akpaghị aka, na ihe egosiri na nsonaazụ ahụ gosipụtara ozugbo na akwụkwọ kwekọrọ na ya yana usoro njikwa ego.
Akpaaka nke ịkọ akụkọ na ịkọ akụkọ nke ụlọ ọrụ kredit na-emeziwanye usoro dị n'ime ya nke ụlọ ọrụ akwụmụgwọ nwere na ọrụ ya, na-achịkwa ọrụ na ọrụ nke ndị ọrụ, na-achịkwa njikwa na ịza ajụjụ na ịkọ akụkọ, na-eme ka mgbanwe mgbanwe ozi na-agba ọsọ, ma si otú a na-abawanye arụmọrụ na Izizi nke ajụjụ, ogo ịkọ akụkọ na etu ụlọ ọrụ si agba ọsọ, na-ebelata ụgwọ nke ụlọ ọrụ akwụmụgwọ site na mbenata ụgwọ ọrụ yana ịbawanye nrụpụta ọrụ, nke, n'ihi nke a, ga - eduga na njikarịcha uru. N'iji akpaaka nke ịkọ akụkọ na ịkọ akụkọ, ụlọ ọrụ na-ahụ maka kredit na-ahazi usoro niile maka ịdebe ndekọ nke ọrụ ya yana ịhazi ozi gbasara ụdị akụkọ dị iche iche, gụnyere ịza ajụjụ maka ndị mmekọ na akụkọ ndekọ ọnụ ọgụgụ maka onye na-achịkwa, ebe akpaaka ka na-ewepụta akwụkwọ niile nke ụdị ọ bụla nke na-akuko.
Ya mere, itinye aka nke ndị ọrụ nke ụlọ ọrụ akwụmụgwọ na-ebelata na akpaaka nke ọrụ ya, gụnyere ịza ajụjụ na ịkọ akụkọ, ebe ọ bụ na mmemme akpaaka na-arụ ọtụtụ ọrụ yana, yabụ, na-arụ ọrụ kama ndị ọrụ, ndị ọrụ ha ugbu a gụnyere ịgbakwunye ọgụgụ ha na ụdị eletrọnịkị a kpọtụrụ aha n'elu, nke bụ onye ọ bụla maka ndị ọrụ niile ma na-enyekwa ọrụ onwe onye maka ogo nke ozi etinyere n'ime ha na nnabata akpaghị aka nke ụgwọ ọnwa kwa ọnwa, na-echebara ozi ezigara na ha.
Akpaaka nke ụlọ ọrụ kredit na-achịkwa ihe omume nke ndị ọrụ, na-atụle oge na oke ọrụ metụtara ọrụ ọ bụla emere, hazie ọrụ ha, na-enye ndekọ ọ bụla na mpaghara ọrụ ọ bụla - mpaghara nke ibu ọrụ n'ime ikike na ọrụ e kenyere ya. N'otu oge ahụ, akpaaka nke ịkọ akụkọ na ịkọ akụkọ nke ụlọ ọrụ na-ahụ maka kredit na-enye ụdị elektrọnị dị n'otu dị ka akwụkwọ akụkọ ọrụ ọ bụla iji mee ka usoro ntinye data nke ndị ọrụ na-eme kwa ụbọchị, si otú ahụ na-abawanye ọsọ nke usoro, dị ka ekwuru n'elu. The unification nke iche awa site akpaaka na-eduga na ịdị n'otu nke arụmọrụ, na-eweta ha na-egbu ka automatism, nke a chọrọ iji na-ebuli ihe omume. N'otu oge ahụ, akpaaka nke ụlọ ọrụ kredit na-edekọ ego ole ndị ọrụ na-arụ n'oge, dịka nhazi nke arụmọrụ, ma nyochaa ịdị irè nke ọ bụla mgbe oge na nkwadebe nke mkpesa nke ime na nyocha nke ụdị niile nke ọrụ na ndị ọrụ metụtara ha.
Akpaaka nke ụlọ ọrụ kredit na-enye ya ohere ịnwe nyocha nke ọrụ ya oge niile, gụnyere nyocha nke ọnọdụ nke ngwa nbinye ego nke mejupụtara uru ya, yabụ nyocha ha na-eme ka o kwe omume ịchịkwa omume ndị ahịa, nnabata ha na ọnọdụ kredit, oge ịkwụ ụgwọ, na ego nke ụgwọ dị. Ekwesiri ịgbakwunye na naanị USU Software na-enye nyocha akpaka na ngalaba ọnụahịa a, ebe onyinye ndị yiri ya sitere na ndị mmepe ndị ọzọ nwere ike ịnye ya naanị na ụgwọ dị elu nke mmemme ahụ. Otu ụlọ ọrụ na-akwụ ụgwọ anaghị enweta naanị akụkọ na nyocha nke ụdị ọrụ ọ bụla kamakwa ọnụ ọgụgụ nke ndị na-egosi na mgbanwe nke mgbanwe n'oge gara aga, nke na-enye ohere ịme atụmatụ dị irè maka oge ọdịnihu, na-atụle data gbakọtara na ịkọpụta nsonaazụ, na-akọwapụta ha ihe a chọpụtara.
Emebere mmemme a na kọmpụta nke ụlọ ọrụ kredit n'aka ndị ọkachamara anyị, na-etinyeghị ndị ọrụ ya na ntinye ahụ, mana na-enye ngosipụta dị mkpirikpi nke ike sọftụwia niile, nke na-enyekwa ndị ọrụ ohere ịmara onwe ha ngwa ngwa maka arụmọrụ maka mmepe na-aga nke ọma. Agbanyeghị na ngwaahịa anyị dị iche na ndị ọzọ niile site na igodo ha dị mfe na interface dị mfe, nke a na-enye gị ohere itinye ndị ọrụ na ọrụ na-enweghị ikike ndị ọrụ ọ bụla, na-enye sistemụ akpaaka nwere ọtụtụ ozi Ozi dị iche iche dị otú ahụ na-enyere aka ịkọwapụta nkọwa zuru ezu na nke miri emi banyere ọnọdụ nke usoro na arụmọrụ ndị a na-arụ n'oge enyere na ụlọ ọrụ ego.
Iji hazie ọrụ na-arụ ọrụ, a oke nke 50 interface imewe nhọrọ na-awa site a adaba mpịakọta wheel na isi ihuenyo. Ndị ọrụ na-enweta nnweta dị iche na data ọrụ, na-ejedebe site na oke ọrụ ha na ike ha, site na ịnye ikike nke onwe na okwuntughe. Nbanye nbanye na-enye maka ịrụ n'ụdị elektrọn nkeonwe, nke dị mfe ịchịkwa ogo, oge igbu ya, yana ntụkwasị obi data. Njikwa bụ ibu ọrụ nke njikwa, nke nwere ohere ịnweta akwụkwọ niile n'efu, na-eji ọrụ nyocha iji mee ka usoro nyocha maka ndekọ dị ngwa.
Site na ọdụ data etolite na sistemụ arụmọrụ, ndị ahịa ahịa, nomenclature, ego mgbazinye ego, ndị ọrụ ọrụ, na ndị ọzọ ka ewepụtara maka ịza ajụjụ na ịkọ maka ụdị ọrụ dị iche iche. Isi ihe gbasara ịkwụ ụgwọ maka mgbazinye ego bụ ntọala nke mgbazinye ego, nke nwere ọ bụghị naanị ndepụta zuru ezu nke ha kamakwa ozi zuru oke na ngwa ọ bụla yana usoro, oke na ọnọdụ. Maka ego mgbazinye ọ bụla, ịnwere ike igosipụta ndekọ zuru ezu nke arụmọrụ emere na ụlọ ọrụ akwụmụgwọ kemgbe ewepụtara ya, gụnyere ụbọchị, aha ọrụ ndị emere, yana nsonaazụ ndị enwetara. Ọrụ ọ bụla emere na nchekwa data mgbazinye ọrụ na-ekenye ya ọnọdụ dị iche na agba ya maka njikwa anya na ọnọdụ nke ego mbinye ego iji wee chọpụta ya ngwa ngwa.
Sistemụ na-akpaghị aka nke ụlọ ọrụ kredit na-ejikarị ngosipụta nke agba nke ihe ngosi, nke na-azọpụta ndị ọrụ oge na ịtụle usoro dị ugbu a ma nweta nsonaazụ. Enwere ike idozi ego mgbazinye ego site na ọnọdụ iji gosipụta mpaghara ọrụ ahụ n'ezie, nke na-enyere aka ịkewapụta ọrụ ụlọ ọrụ na, ya mere, mee ka mmejuputa ha. Ọ dịghị obere ihe dị mkpa karịa ntọala mgbazinye ego bụ isi ndị ahịa, ebe ọ bụghị naanị data nkeonwe na kọntaktị nke ndị na-agbaziri ego na-etinye uche kama ana-achịkọta akụkọ zuru oke nke mmekọrịta na nke ọ bụla. N'ebe a, etinyere aha otu kọntaktị na onye ọ bụla na-azụ ahịa, ebe a na-egosi omume niile emere site na ụbọchị, gụnyere oku, leta, na nsonaazụ kọntaktị.
E kewara ndị ahịa n'ime otu dịka ọkwa nke ụlọ ọrụ akwụmụgwọ họọrọ, nke a na-enye gị ohere ịhazi kọntaktị na otu ndị lekwasịrị anya, nke na-eme ka mmekọrịta nke mmekọrịta dị elu. Ihe omume a n’onwe ya na-eme atụmatụ niile metụtara ịkọ akụkọ na ịkọ akuko, gụnyere ịkwụ ụgwọ na-atụle usoro ịkwụghachi ụgwọ, ọmụrụ nwa, ọrụ, wee na-agụghachi ụgwọ ahụ mgbe ọnụọgụ mgbanwe na-agbanwe. Ọ na-agbakọ ụgwọ ọrụ ndị ọrụ na ndị ọrụ dịka olu nke ọrụ ndị edebanyere aha na ndekọ ọrụ ha, na-abawanye ọrụ nke ndị ọrụ.